တစ် ဦး ကားဂိုဒေါင်4တည်ဆောက်ခြင်း – နံရံတင်ခြင်း
လုံးများ (နံရံဘောင်ဘောင်အဖွဲ့ဝင်များ) ကို 16 “ သို့မဟုတ် 24” စင်တာများပေါ်တွင်ထားရှိနေကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာတလုံး၏အလယ်အတိအကျမှအတိအကျစင်မြင့်အထိ ၁၆ သို့မဟုတ် ၂၄ လက်မရှိသည်။ မည်သည့်အကွာအဝေးလိုအပ်သည်ကိုကြည့်ရန်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးကုဒ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု၊ မိုးရေများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းအစများကိုထုတ်ယူသောအခါအောက်ပါသင်္ကေတများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသည်။ X-Standard ...
ဘိလပ်မြေကိုအရောင်သုံးရန်အဓိကနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာအသစ်စက်စက်ဆောက်လုပ်ထားသောကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်တစ်လျှောက်ပျံ့နှံ့နေသောခြောက်သွေ့သောခြယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်မျိုးမှာအမှုန့်များသို့မဟုတ်အရည်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုမသွန်းလောင်းမီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးနည်းလမ်းမှာလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသော်လည်းအလွယ်တကူပုတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။ အသေးစားစီမံကိန်းများအတွက်ရောထွေးသောနည်းလမ်းသည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်ပြီးမျက်နှာပြင်အရောင်သည်ကြီးမားသောlargeရိယာများအတွက်ကြီးမားသည်။ အမှန်တကယ်ကြီးမားသောအလုပ်များအတွက်ကွန်ကရစ်ခြံမှထုတ်သောအခါခြယ်ပစ္စည်းကိုသုတ်နိုင်သည်။ နည်းလမ်း ၁ – မျက်နှာပြင်အရောင် ဤနည်းလမ်းသည်ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်စိုစွတ်နေသင့်သည်။ အမှုန့်အပေါ်ဖြန်း သင်၏ကွန်ကရစ်ပျောက်ကင်းသွားသည်နှင့်အမျှtheရိယာအားရောင်စုံအမှုန့်များဖြင့်ပင်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်အမှုန့်များမစုစည်းပါနှင့်။ အကယ်၍ theရိယာသည်သေးငယ်ပါကအမှုန့်ကိုလက်ဖြင့်သုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်နှစ်သက်သောလျှောက်လွှာပုံစံဖြစ်လျှင်လက်အိတ်များကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။ ပိုကြီးတဲ့ရိယာများအတွက် ...
ခေါင်မိုးသည်သင်လုပ်ချင်သောအရာပေါ် မူတည်၍ နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ကြားရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ခေါင်မိုးပေါ်မှအနားယူခြင်းသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူကအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏ခေါင်မိုးကိုဒြပ်စင်များမှကာကွယ်ရန်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ပြားချပ်ချပ်ခေါင်မိုးတွင်အသုံးပြုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် slanted ခေါင်မိုးနှင့်မတူသည်မှာပြားသည် element များအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တစ်နေ့နာရီပေါင်းများစွာနေရောင်ခြည်ဖြာထွက်ခြင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိစုဆောင်းခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်စောင်းနေသောတည်ဆောက်ပုံပေါ်တွင်ကဲ့သို့မရွေ့မသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်လျှင်အမိုးကိုကန့်လန့်ကာဖြင့်သုတ်နိုင်သည်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်တော့မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ရွေးချယ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါင်မိုးကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ခေါင်မိုးကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုသိခြင်းကသင့်အားအချိန်၊ ငွေနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကိုသက်သာစေသည်။ ...
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများကြောင့်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ရေကန်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းနေသောကျောက်တုံးများသည်အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများတည်ဆောက်ခြင်းကိုအလွန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမှိုနှင့်အနာကြီးထွားမှုကိုကာကွယ်ရန်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးကသင့်ရဲ့ရေကန်ကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ၁။ Acid ရေချိုးပါ သင်၏ရေကန်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာအက်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ဆစ်သည်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်အက်ဆစ်ကိုမဆိုမကိုင်တွယ်မီ၊ သင့်တော်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပြီးအက်ဆစ်ထုတ်လုပ်သူ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဂီယာကိုဝတ်ဆင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်သင်၏အရေပြား၊ မျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစနစ် (သို့) လက်များကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အတည်ပြုထားသောကွန်တိန်နာတစ်ခုတွင်အက်ဆစ်တစ်အက်ဆစ်ကို ၂ ...
ရေပူစမ်းနှင့် Spa ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
<Hot Tubs နှင့် Spas များဝယ်ယူရေးလမ်းညွှန် မင်းရဲ့ hot tub အသစ်ကိုဝယ်လိုက်ပြီ။ သင်၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောကြွက်သားများကိုသက်သာစေရန်ဖိအားပေးသောရေပူဂျက်လေယာဉ်များ၏အတွေးများသည်ခက်ခဲသောနေ့တစ်နေ့၏အလုပ်ပြီးနောက်စစ်မှန်သောကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်ကကျဆင်းခြင်းမပြုမီ, ယေဘုယျအားဖြင့်ရေပူရေနွေးငွေ့နှင့် spas အကြောင်းကိုသင်သိရန်လိုအပ်သောအရာအနည်းငယ်ရှိပါသည်။ သင်၏ရေပူစိမ်အတွေ့အကြုံကို ပို၍ သာယာစေရန်အတွက်များပြားလှသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုမမေ့ပါနှင့်! ရေပူရေစိမ်များနှင့်ရေပူရေငုပ်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကတည်းကရှည်လျားသောလမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ...
ထိပ်တန်း5သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် Friendly မျက်နှာကြက်ပစ္စည်းများ
ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုသင်ဂရုစိုက်လျှင်၎င်းအတွက်အမိုးများသည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ဤအမိုးမိုးပစ္စည်းများသည်အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကြမ်းတမ်းသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုကိုင်တွယ်ရန်မလိုဘဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုချွေတာလိမ့်မည်။ အမိုးများစွာနဲ့ပစ္စည်းတွေ ၀ ယ်တဲ့အခါစဉ်းစားစရာများစွာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်အစိမ်းရောင်အမိုးမိုးပစ္စည်းများအတွက်စျေးကွက်ထဲရောက်နေပါကလယ်ကွင်းများလျော့သွားနိုင်သည်။ ကြွင်းသောအရာအပေါ်ထင်ရှားတဲ့အများအပြားရှိပါတယ်, ဤဆောင်းပါးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ 1. သတ္တုခေါင်မိုး ကျွနု်ပ်တို့တွင်သံချေးတက်နေသောအိမ်များသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သတ္တုခေါင်မိုးများများကိုတိုင်းပြည်တွင်တွေ့ရှိရခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏစဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ လူများသည်သူတို့၏စွမ်းအင်ဥပဒေကြမ်းများကိုပိုမိုသတိပြုမိလာသည်နှင့်အမျှသတ္တုခေါင်မိုးသည်လူကြိုက်များလာသည်။ သတ္တုခေါင်မိုးတစ်ခုသည်သင့်အားအပူပေးမှုနှင့်အအေးခံခြင်းအတွက်ငွေများစွာသက်သာစေသည်။ အကြောင်းမှာသူတို့သည်အခြားပစ္စည်းများကဲ့သို့အပူကိုစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်တည်း။ ...
အုတ် Paver အဆင့်များထည့်သွင်းနည်း
အုတ်တပ်ဆင်ခြင်း ချိတ်ဆက်ခြေလှမ်းများ အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ မင်းရဲ့အုတ်ပုံခြေရာတွေကိုဘယ်လိုပုံသွင်းချင်တယ်ဆိုတာသိပြီဆိုရင်တူးဖော်ရေး၊ အုတ်မြစ်နဲ့ခင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာဆက်တိုက်ဆက်သွားနိုင်တယ်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်ရှိခြင်းသည်သင့်အားချပ်ဝတ်တန်ဆာများခင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုအမြဲတမ်းပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည်။ ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်းနှင့်ကျောက်တုံးများလောင်းခြင်းအတွက်အုတ်ခင်းများခင်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်သားအင်အားနည်းသောကြောင့်ပိုမိုကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်ကိုရရှိသည်။ အဆင့် ၁ – အဆင့်များကိုစီစဉ်ပါ မြေပြင်မကျရောက်မီရိုးရိုးပုံကြမ်းဆွဲခြင်းဖြင့်အဆင့်များမည်သို့ကြည့်မည်ကိုစီစဉ်ပါ။ လှေကားထစ်တွေကဖြောင့်သွားမှာလား၊ ကပ်လျက်ရှုခင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ လှေကားထစ်များတက်ပါလိမ့်မည်။ ...
ကုန်းပတ်နှင့် Patios: ခြားနားချက်ကဘာလဲ
ဟင်းလင်းပြင် patio ဟူသောစကားလုံးသည်စပိန်မှ “ courtyard” သို့မဟုတ် “ forecourt” – ယေဘုယျအားဖြင့်ထမင်းစားခန်းနှင့်အပန်းဖြေရန်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်နေအိမ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသောကျောက်ခင်းထားသောisရိယာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကုန်းပတ်သည်အစဉ်အလာအားဖြင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလူနေအိမ်နှင့်တွဲဖက်ထားသည့်အပြင်ဘက်ကြမ်းပြင်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤရိုးရှင်းသောအချက်အလက်များသည်သင်၏အိမ်နောက်ဖေးတွင်သင်လိုချင်သောအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လွန်စွာအထောက်အကူမပြုပါ။ သင်ပိုမိုသောအချက်အလက်များလိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့ဒီမှာပါ။ ဟင်းလင်းပြင်သို့မဟုတ်ကုန်းပတ်: အချို့သော ...
အခိုင်မာဆုံးနှင့်ထိန်းသိမ်းထားသောသစ်သားကုန်းပတ်များတောင်မှအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှဟောင်းနွမ်း။ ပင်ပန်းနေလိမ့်မည်။ ဒါကရိုးရှင်းတဲ့ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုပဲ၊ အစွန်းအထင်းသစ်တစ်ခုက၎င်းသည်စုံတွဲတစ်တွဲရက်များအတွင်းအသစ်များကဲ့သို့ကောင်းသောပုံသဏ္makeာန်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်၏ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်အပြီးသတ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အချိန်တန်ပါကအသစ်သောအရာတစ်ခုခုကိုမဖြုတ်မီလက်ရှိအစွန်းအထင်းနှင့်အကာအကွယ်ကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်သည်။ သင်အပြီးသတ်ဟောင်းကိုဖယ်ရှားရန်ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။ ထို့ကြောင့်အသစ်ကိုသင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆင့် 1 – ကုန်းပတ်လှည်း သင်၏ပထမခြေလှမ်းမှာဆုံးရှုံးသွားသောအပျက်အစီးများအားလုံးကိုဖယ်ရှားရန်ကုန်းပတ်ကိုမာကျောသောတံမြက်စည်းဖြင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ချွတ်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သင့်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရရန်အတွက်ကုန်းပတ်ပရိဘောဂများနှင့်အပင်များအားလုံးကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရွှေ့။ သေချာဖယ်ထားပါ။ သင်နောက်မှ၎င်းကိုပိတ်လိုက်ရုံသာမကဤအဆင့်ကိုကျော်နိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ တံမြက်စည်းသည်အကွက်များအကြားရှိအရွက်များနှင့်အကိုင်းများကိုအလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အဆင့် ၂ ...
ကျောက်တုံးတံခါးများကိုအဆင့် (၅) ဆင့်ဖြင့်မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
မုတ်လှေကားအများစုကိုသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းသင့်အိမ်ရှေ့တံခါးမ ၀ င်ခင်သင်၏အိမ်တံခါးရှေ့သို့ရောက်သောကျောက်လှေကားများကသင်၏အိမ်ကိုသီးခြားထားနိုင်သည်။ သင်၏မုတ်နှင့်အိမ်ရှေ့တံခါးတို့ကိုကျောက်တုံးများတည်ဆောက်ခြင်းသည်အချိန်တိုအတွင်းအိမ်တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်စျေးသိပ်မကြီးသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သင်၏ခြေလှမ်းများကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်ဤရိုးရှင်းသောညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ အဆင့် ၁ – သင့်ကျောက်ခဲများကိုဖော်ထုတ်ပြီးစုဆောင်းပါ သင်၏ခြေလှမ်းများအတွက်အသုံးပြုရန်ကျောက်များကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ အိမ်တိုးတက်မှုစတိုးဆိုင်အများစုတွင်ကျောက်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုသယ်ဆောင်လေ့ရှိပြီးအများစုမှာအနောက်၊ မီးခိုးရောင်နှင့်အညိုရောင်အလံများ၊ အဖြူရောင်ထုံးကျောက်များနှင့် Arkansas ချောင်းကျောက်များဖြစ်သည်။ သင်၏ကျောက်များဝယ်ယူပြီးလျှင်လှေကားထိပ်ရှိအတူတကွစုဆောင်းပါ။ အဆင့် ၂ ...